Xog: Askari Dowladda Ka Tirsan Oo Loo qabtay Dhacdadii Xamarwayne ee lagu weeraray Gaariga Haweenka Qaranka. – Hornafrik Media Network
Askari ka tirsan Ciidamadda Dowladda Somalia ayaa loo xiray Weerarkii lala bartilmaameedsaday Gaari ay lahaayeen Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed, kaasoo ay ku dhinteen Xubin ka tirsan Ururka Haweenka Qaranka, iyo Wiil ay dhashay Gudoomiyaha Haweenka Qaranka oo waday Gaariga.
HornAfrik ayaa ogaatay in Askarigan oo haysta Qori Noociisu yahay M16 oo lagu farsameeyay Maraykanka ay Saaka ku soo qabteen Hawgal Qorshaysan Ciidamadda Ammaanka, Kadibna la keenay Xarunta Baarista Dambiyadda Booliska ee CID. Waxaana haatan socda baaritaan ku saabsan dhacdada.
Saraakiil Boolis ah oo Codsaday inaan Magacooda loo adeegsan Warbaahinta ayaa sheegay in Askarigan markii uu Dilka gaysanayay ka soo dagay Gaari yar oo Noociisu yahay Spacio, kadibna waxa uu Rasaas ku furay Gaariga Gudoomiyaha Haweenka Qaranka, isagoo kadibna ku laabtay Gaariga uu saarnaa oo uu ku baxsaday, Waxaana ay ku doodayaan in markiiba ay aqoonsadeen Dad ku sugnaa Goobta, taasoo siday sheegayaan sahashay in dabagal lagu sameeyo.
Askarigan loo haysto inuu Dilka gaystay inkastoo uu ka tirsanaa Ciidamadda Dowladda, haddana waxaa lagu eedaynayaa inuu u shaqaynayay Kooxda Alshabaab. Waxaana Askarigan la qabtay uu ka tirsan yahay Ciidan Nabadsugid ah oo illaaliya Safaaradda ay Turkidu ku leeyihiin Muqdisho, Isagoo Gaariga uu watayna ay leedahay Safaaraddu.
Safaaradda Turkiga iyo Taliska Nabadsugidda midkoodna kama hadlin Askarigan la qabtay, balse wali waxaa socda Baaritaan la xiriira arrintan.
Xuquuqda Lahaanshaha Warkan Waxaa iska leh HornAfrik, lama badali karo, lamana qaadan karo iyadoo aan la xusayn Lahaanshaha Warka.